Dhismaha App App Pie: Isticmaalaha Saaxiibtinimada leh, Nidaamka Dhismaha Nidaamka Nidaamka Nidaam La'aanta ah | Martech Zone
Appy Pie App Builder: U Isticmaalaha Saaxiibtinimo, Madal Nidaam Dhismeedka Nidaamka Nidaamka Nidaamka
Jimce, Maarso 27, 2020 Jimce, Maarso 27, 2020 Jayraj Shetty
Horumarinta Codsiga waa warshad isdaba-joog ah oo isbedeleysa. Iyada oo ay sii kordhayaan ganacsiyada u tartamaya joogitaanka khadka tooska ah, ururada horumarinta barnaamijyada shaqooyinkooda ayaa u go'an iyaga. Waxaa si isdaba joog ah u kordhayay baahida loo qabo barnaamijyada abuuray suuq ay ku badan yihiin kuwa hadda jira. Intaas waxaa sii dheer, waa warshad ay la daalaa dhacayaan kororka qiimaha iyo dalabaadka isa soo taraya. Taas ka sokow, barnaamijyada jira waxay u baahan yihiin dayactir joogto ah. Cilmi baaris ayaa tilmaamaysa taas 65% kheyraadka waxaa lagu kharash gareeyay isku dayida in la ilaaliyo barnaamijyada jira ee ganacsiyada.
Hay'adaha ayaa laga yaabaa inay ka badbaadeen tan iyo hadda, laakiin kor u kaca qiimaha iyo maalgashiga loo baahan yahay si loo ilaaliyo loona cusbooneysiiyo barnaamijyadooda ayaa sawir xun u leh mustaqbalka warshadan. Waa wax iska dabiici ah in ururada badankood ay ku fooraraan horumarka AGILE oo leh heerar kala duwan oo guul ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira tiknoolajiyad cusub oo siinaysa ururada fursad ay horay ugu socdaan suuqa, u hirgeliyaan AGILE, hoos u dhigaan kharashyada isla markaana kor ugu qaadaan tirooyinka. Waa horumar-no app code.
No-code waa mustaqbalka horumarinta barnaamijka. In kasta oo koodhku yahay warshad marwalba hareeraysan doonta, lambar koodh looma jeedin ururada si loo fududeeyo geeddi-socodka horumarinta barnaamijka. Sida laga soo xigtay a sahan dhawaan, 40% ururada midkoodna ma ansixin lambar ama wuxuu qorsheynayaa inuu qaato sanadka soo socda.
Guudmarka Xalka Appy Pie App
Appy Pie waxay siisaa xalka dhismaha barnaamijka ururada iyo dadka. Abaabulaha barnaamijkeeda lahaanshuhu waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee sameeya barnaamijka suuqa maanta. Lagu yaqaan dabeecad ahaan saaxiibtinimo, sameysteha barnaamijku wuxuu kaa caawin karaa inaad barnaamijyo ku sameyso daqiiqado yar gudahood. Appy Pie wuxuu kuu ogolaanayaa inaad horumariso barnaamijyada Android, iPhone iyo PWA ee macaamiishaada. In ka badan 200 astaamo qarsoon, sameynta abidku waligeed ma fududaan ama dhakhso badan.
Appy Pie App Dhise ka yar yahay 5 sano. 5tan sano gudahood waxay u daayeen dadka iyo ganacsiyada inay sameeyaan malaayiin barnaamijyo ah. Waxaa taageera khabiiro horumariya, softiweerku wuxuu leeyahay gabi ahaanba kumbuyuutar isku xiran oo si weyn u jaraya waqtiga horumarka. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale yareyneysaa habka dayactirka iyo cusbooneysiinta barnaamijka kaliya qasabno yar. Appy Pie, waxaad ku sameyn kartaa barnaamijyo badan oo kala duwan sida barnaamijyada warbaahinta bulshada, barnaamijyada ganacsiga, barnaamijyada taageerada macaamiisha, barnaamijyada AR / VR, barnaamijyada guryaha iwm.
Iyadoo la adeegsanayo isku-xirnaanta fudud ee 'Appy Pie', sameynta barnaamijka waa la wanaajin karaa oo si fudud ayaa loo fududeyn karaa.
Maxaa kala saara Appy Pie App Builder:
Nadiifi naqshadda muraayada loo qoondeeyay sahlanaanta fudud.
In ka badan 200 oo astaamood sida ogeysiisyada riixista, awoodaha VR, warbaahinta bulshada ee isku dhafan iyo sheekooyinka
Taageerada daabacaadda ee gacan-ku-haynta dukaamada barnaamijka. Kaabayaasha taageerada macaamiisha ee aadka ufiican macnaheedu waa in Appy Pie ay marwalba diyaar u tahay inay kucaawiso.
Appy Pie wuxuu ku jiraa duub kumbuyuutarradeedu, isagoo abuuraya alaab cusub, oo ka wanaagsan maalin kasta. Waxay ku bilaabeen qaab fudud oo loo adeegsan karo dhise-no-code waxayna ku dabaqeen falsafad la mid ah sidii loo abuuri lahaa degello degel-dhiseyaal aan lahayn lambarro, koodhadh iyo aaladda naqshadeynta garaafka. Appy Pie hadda ma laha qorshayaal ay ku carqaladeyneyso warshadaha IT-da iyada oo aan lahayn barnaamij-dhise barnaamij waxayna ujeeddadeedu tahay isku-darka nidaamyada dhaxalka si loo hubiyo in warshadaha horumarinta barnaamijku ay si wadajir ah u koraan.
Run-no-code ayaa laga yaabaa inuu aad u fog yahay, laakiin Appy Pie wuxuu naqshadeeyay softiweer kaas oo daryeeli kara dhammaan culeyska culus ee ku lug leh horumarinta barnaamijka, ka caawinta ururada meel kasta inay nadiifiyaan gadaal-dhigooda isla markaana abuuraan barnaamijyo karti leh oo dadaal ahaan aad u yar. Xaqiiqda dhabta ah ee gacanka App Builder waa xaqiiqda ah inay fududeyso dayactirka looga baahan yahay abka. Iyadoo la dhisayo barnaamijka, cusbooneysiintu waxay u baahan tahay dhowr guji oo fudud oo u oggolaanaya ururada inay xoogga saaraan dadaalkooda ku saabsan curinta iyo keydinta ilaha muhiimka ah si ay ula kulmaan baahida warshadaha sii kordheysa.
Abuuritaanka abka leh Appy Pie
Abuuritaanka barnaamijyada leh Appy Pie way ka fududdahay sidaad moodeysid. Waa hab fudud oo 3 tallaabo ah.
Register - Isku qor Appy Pie. Dashboard kaaga, hoosta tabta naqshadeynta, ku xulo naqshad naqshadeynta abkaaga. Appy Pie wuxuu bixiyaa boqolaal shey oo uu ka kala xusho. Wax ka beddel shaxankaaga oo dooro midabada, noocyada iyo qaabeynta. Soo rar astaanta astaantaada.
Habee - Tallaabada xigta waxay ku lug leedahay ku darista astaamaha barnaamijkaaga. Qeybaha tabka, waxaad ka raadin kartaa astaamaha ka dibna riix muuqaal si aad ugu darto barnaamijkaaga. Waad u habeyn kartaa muuqaal kasta si aad ugu haboonaato ujeeddadaada sida ugu fiican. Malaayiin nooc oo barnaamijyo ah ayaa lagu abuuri karaa iyada oo la adeegsanayo habeynta laga heli karo dashboardka dhise-hayaha.
imtixaanka - Markaad degto qaabkaaga iyo astaamahaaga, si fudud ugu tijaabi barnaamijkaaga aalad ka dib marka aad qanacdo, ku faafi App Store ama Play Store, ama labadaba.
Taasi waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso si aad ugu abuurto barnaamij Appy Pie ah. Horumarinta barnaamijka ayaa isbeddelaya. No code waa marxaladda xigta ee lama huraanka ah ee isbeddelladan. Appy Pie wuxuu fursad u siiyaa dhammaan ganacsiyada inay ka hor maraan qalooca. Ansixinta sii kordheysa ee code la'aan iyo horumarka degdegga ah ee barxadda ayaa mustaqbal ifaya u leh qof walba.
Ku soo biir kacdoonka no-code maanta! Qof kasta oo ka shaqeeya guriga, nabadgelyo ha ahaado!
Saxiix u samee Appy Pie
Tags: appie piebarnaamijyada ganacsigabarnaamijyada taageerada macaamiishalambar lahaynNo-code dhise appbarnaamijyada warbaahinta bulshada
Jayraj waa qoraa maadi ah oo hadafkiisu yahay inuu noqdo polymath. Isagu weli ma joogin laakiin raadintiisu waxay siisay aqoon ballaadhan oo ku saabsan waxyaabo badan. Wuxuu isku dayaa inuu aqoontiisa la wadaago qoraal. Waqtigiisa firaaqada, wuxuu ku dhexwareegaa internetka, socod dheer ayuu sameeyaa, iskuna dayaa inuu haasaawe la galo. Wuxuu jecel yahay jacaylka sida Terry jecel yahay jacaylka!
Talooyin Fiidiyowga Iibinta ah oo ka socda Wasaaradda Arrimaha Gudaha
vidREACH: Muuqaalka E-maylka Fiidiyowga ee Feejignaanta ah